Japana: Tetikasa ara-kolontsaina ho fiaraha-mientana noho ny horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Ampahany amin'ny tatitray manokana mikasika ny horohoron-tany tany Japana taona 2011 ity lahatsoratra ity.
Tetikasa ara-kolontsaina miisa telo mifandray no nivoitra vokatry ny fahasimbana naterak'ilay horohorontany sy ny tsunami (tondra-drano mahery vaika) izay nianjady ny faritry ny morondrano avaratr'i Japana tamin'ny zoma farany teo dia ny 11 Martsa, taona 2011 izany.
Namporisika ireo tsara sitrapo manerantany ny mpamorona ny #prayforjapan mba handefa hafatra fanohanana amin'ny alalan'ny famoahana vaovao ao amin'ny vohikala Twitter sy fanolorana fanampiana an-tserasera. Nanamboatra sary famantarana maro izy izay ahitana refy maro karazana azo avoaka printy, sy sorabe mihetsiketsika, ary sarintava amin'ny haino aman-jery sosialy.
Sary famantarana ho an'ny fangatahana fanampiana misy sorabe hoe Mivavaha ho an'i Japana
Io tetikasa io dia notarihan'ny mpitoraka bilaogy iray sy olona matihanina amin'ny fanaovana doka dia i Naoyuki Sato izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Satonao. Nanazava [jp] ny fomba nanombohan'io tetikasa io izy, taorian'ny nandraisany tweet avy any amin'i Mikihiko Sawahata (@hossib), ilay tompon'ny trano lehibe fisakafoanana Japoney Bissoh tao Beaune, Frantsa:
Satonao, te hanangona vola ao amin'ny tranoko lehibe natao hisakafoanana aho ary mba nanontany tena aho raha toa ka mahafantatra olona ianao afaka hamorona sary famantarana iray ho ahy mifandray amin'io fanampiana io? Raha toa ka azo hampidirina amin'ny aterineto ilay izy ka atao PDF , dia azo sintonina ihany koa, azo avoaka printy ka ampiasaina manerana izao tontolo izao.
Nifandray tamin'ny namako Junya Ishikawa (@junyaishikawa) avy hatrany aho tamin'ny alalan'ny Twitter. Nanapa-kevitra ny “hiasa teo no ho eo” izahay, ary nanatona ilay mpamorona sahiran-dava Chie Morimoto (@morimotochie) izahay izay nanaiky avy hatrany ny fangatahanay. Iray andro taty aoriana fotsiny, dia vita hatramin'ny farany ilay sary famantarana. Raha araka ny hevitro dia tsapa ho mivoaka avy ao am-po sy mahavelombelona io sary io. Saro-bidy ihany koa ny fanampian'i Yuko Matsunaga (@ebiita) sy Takeshi Oshii (@gatyaping2) teo amin'ny fanatanterahana izany.
Io tetikasa io koa dia manentana ny vahoaka haneho ny fomba fijeriny izay azo jerena ao amin'ny @prayjp.
"Vonoy ny herinaratra. Handeha isika hatory aloha". Rakitsarin'i @laughsketch.
#setsudencopy no tenifototra nampiasaina tamin'ny tetikasa fiaraha-miasa hamoronana sary apetaka amin'ny afisy izay nandefasana hafatra ny rehetra mba hitsitsy ny herinaratra. Nanazava ny anjara asany io vohikala io:
Niforona manerana izao tontolo izao tao amin'ny Twitter ny teny filamatra izay mampihetsi-po tokoa miangavy ny rehetra hitsitsy ny herinaratra amin'ny alalan'ny tenifototra #setsudencopy. Niainga avy amin'ny fifampitsinjovan'ny vahoaka izy io. Mampalaelo raha tazonina ato amin'ny Twitter fotsiny izany!
Izany indrindra no antony angatahanay alalana hamoaka AFISY mba hitsitsiana ny herinaratra ! Avohay printy izy ireo, ka fenoy ny rindrina rehetra ao amin'ny tanananareo (Fa mangataha aloha alalana ahafahana manao izany, izany an?) Tsy manana milina fanaovana printy ianao? Tsy olana izany. Fantatrao ve fa manana milina fanaovana printy ny Seven-Eleven? Tsindrinareo fotsiny ny numerao voatokana amin'ny “fanaovana printy” eo ambanin'ny afisy tsirairay eo amin'ny milina famoahana kopia maromaro ao amin'ilay magazay!
Raha namorona afisy iray ianao, dia tsondrio fotsiny eo amin'ny “post this energy saving poster” (ampidiro amin'ny aterineto ity afisy fanentanana hitsitsy herinaratra ity), raha mbola votsavotsa ianao amin'ny fampiasana aterineto, dia alefaso mailaka aty aminay fotsiny ilay izy!
Efa navoaka tao amin'ny bilaogy Tumblr , tamin'ny alalan'ny aterineto ireo sary famantarana ireo ka ny voalohany indrindra dia nivoaka tamin'ny faha 12 Martsa taona 2011.
"Tsitsio ny herinaratra aary aza mitsahatra manao izany mihitsy". Rakitsarin'i @HN_feedbot.
"Esory ny lahiny fakana herinaratra". Rakitsarin'i @daitocreative.
Mahazo alalana hijery ireo afisy ireo avokoa ny mpamaky rehetra:
Ny afisy rehetra hita ato amin'ity vohikala ity dia natokana ho an'ny olon-drehetra tsy ankanavaka avokoa noho ny fahalalan'ny mpamoronantsika. Izany hoe, azonao atao ny mamoaka printy azy ireo, manova azy ireo na koa mamorona vaovao mihitsy ary tsy misy fetrany izany, tsy ilànao fahazoan-dalana izany na avy amin'iza na avy amin'iza. Manantena izahay fa hitarika olona maro handray andraikitra haingana ny fisian'ireo afisy ireo.
Sary famantarana noforonin'i Takehiko Inoue.
Hetsika ara-kolontsaina iray lehibe noforonin'ilay manan-talenta Takashi Murakami ny GEISAI tamin'ny taona 2001. Ny andiany faha 15 dia tokony ho atao ny 13 Martsa taona 2011, ao anivon'ny kongresy Tokyo Big Sight.
Tao anatin'ny fanambarana milaza ny fanafoanana izany, dia nanolotra sosokevitra i Murakami :
ka ny lohahevitra tamin'izany dia ny fanohanana ireo niharam-boina sy ireo very fanantenana tanteraka taorian'io horohoron-tany io, hanampy ahy hampiditra sary famantarana amin'ny aterineto ao amin'ny vohikala fampidirana sary ao amin'ny Twitter ve ianareo?
Io hetsika ara-kolontsaina GEISAI io dia tokony ho voalohan-daharana eo amin'io fihetsiketsehana io ary io hevitra io no nahatonga anay nisafidy ny soso-kevitra etsy ambany sy angatahanay ny rehetra mba hanomboka handefa ny sary famantarany aty aminay!
Ny teny fototra dia atao hoe #newday_GEISAI
Hisy foana ny ampitso.
Mbola hiposaka ny masoandro.
Andro iray hafa,
Io no lohahevitray.